Ukukhululwa kukaNelson Mandela
Kusukela ngo Ntulikazi ka 1986 uNelson Mandela wayexhumana namalunga kahulumeni, ekuqaleni noNgqongqoshe Wezobulungiswa uKobie Coetzee, wabe esehamba noNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komthethosisekelo uGerrit Viljoen. Ekugcineni wahlangana noMongameli Wezwe uPW Botha ngoNtulikazi 1989 eTuynhuys. NgoZibandlela 1989 wahlangana nomongameli wezwe omusha, uFW de Klerk. Ngo-2 Nhlolanja 1990, uMongameli wezwe uDe Klerk wamemezela ukuthi i-ANC kanye namanye amaqembu ezombusazwe aphikisiwe ngesikhathi ekhuluma ePhalamende. UMandela wakhululwa etilongweni ngo-11 Nhlolanja 1990. UMandela washeshe wakhuluma nemibuthano emikhulu eKapa, ​​eSoweto naseThekwini eyadonsela amakhulu ezinkulungwane zabantu.
Ukuhola Kukhetho Luka 1994
Iminyaka elandela ukufika kuka-1994 yayimatasa kakhulu. UNelson Mandela waya eNingizimu Afrika nasezingxenyeni zomhlaba, ehlangene namalunga abalulekile kahulumeni kanye ne-ANC. Uqale ngokuya eLusaka ukuhlangabezana neKomidi eliPhezulu le-ANC ngoNdasa 1990. UMandela wabe esevakashela uMongameli we-ANC - u-Oliver Tambo eSweden, kodwa kwakudingeka aqede uhambo ngaphambi kwenkinga ekhulayo eNingizimu Afrika. NgoNhlaba 1990, uMandela waba yingengxenye eyezikhulu ze-ANC, ezaba nezingxoxo nabameli baseNingizimu Afrika eGroote Schuur. Ngohlangulana uMandela waqala ukuhamba ngeviki ayisithupha eYurophu, e-United Kingdom, eNyakatho Melika nase-Afrika. Wamukele ukuqashelwa nomaphi lapho eya khona. Ngo-1992, uMandela waqhubeka nohlelo lwakhe lokuhambela amazwe amaningi, ehambela eTunisia, eLibya naseMorocco. Yena noMongameli Wezwe - uFW De Klerk wamukela ngokuhlanganyela i-Unesco Houphouet-Boigny Peace Prize eParis ngo-3 Nhlolanja Ngesikhathi esifanayo la madoda amabili aye emhlanganweni wezomnotho emhlabeni eDavos, eSwitzerland. Ngo-13 Mabasa 1992, uMandela wabiza ingqungquthela yabezindaba lapho yena nomkakhe, uWinnie, bevumelene ukuhlukaniswa komshado ngenxa yokungezwani.
Ukurekhoda kokuqonda okubhalwe phansi
UMandela ubonise ngo-Mandulo 1992 ukuthi ulungele ukuhlangabezana noDe Klerk ngesimo sokuthi uzovimbela ukuboniswa komphakathi kwezikhali eziyingozi futhi akhulule iziboshwa zezombangazwe. Bahlangana ekupheleni kwenyanga futhi lezi zinkulumo zombili zaholela ekusayineni kweRekhodi Yokuqonda kwabaholi ababili, okwenza ukuthi izingxoxo ziphinde zenziwe.
NgoMandulo 1993, uMandela wavakashela iMelika futhi wakhuthaza abaholi bezamabhizinisi emhlabeni ukuba baphakamise izigwegwe zezomnotho eNingizimu Afrika. Phakathi nengxenye yokugcina ka-1993 nasekuqaleni kuka-1994 uMandela wanconywa egameni le-ANC okhethweni lwango-1994 futhi wabhekisela enkulumweni enkulu yemibuthano kanye nezinkundla zabantu. Ngo-1994, okhethweni lokuqala lokuqala lwabanjwa, ngoba wonke amalunga omphakathi uvota kungakhathaliseki ukuthi uhlanga lwawo luphi. Ngo-9 Nhlaba 1994,
uMandela wakhethwa njengoMengameli wezwe waseNingizimu Afrika. Ukuvulwa kwakhe komongameli kwenzeka ngosuku olulandelayo eNyuniti YaseNyunyana ePitoli futhi kwaba khona umhlangano omkhulu kunazo zonke wabaholi bamazwe abahlala eNingizimu Afrika. Ngesikhathi sokukhulumisana kwakhe, uMandela wabiza isikhathi sokuphulukisa futhi wathi uhulumeni wakhe ngeke avumele noma yiluphi uhlobo lokubandlulula. UMandela wathembisa ukudala umphakathi lapho bonke abantu baseNingizimu Afrika behamba khona bebodwa bengesabi.
Ngo-1999 uMandela washiya umhlalaphansi emsebenzini wakhe wezombusazwe, kodwa waqhubeka emkhankasweni wezindaba zezempilo nezemfundo. Ngokudabukisayo uNelson Mandela washona ngoZibandlela 5, 2013 ngesikhathi eneminyaka engu-95 ubudala. INingizimu Afrika futhi ngempela izwe lilila ukudlula kwalowo muntu onomusa nesibindi.
INelson Mandela Foundation kanye nefa likaNelson Mandela Children's Fund sikaNelson Mandela kusekhona.